अब नेपालीलाई सहज छैन साउदी अरब, यी स्थानबाट १६ हजार ईलिगल पक्राउ ! - jagritikhabar.com
अब नेपालीलाई सहज छैन साउदी अरब, यी स्थानबाट १६ हजार ईलिगल पक्राउ !
साउदी अरबले आवासीय र श्रम कानुन तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने झण्डै १६ हजार व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेको छ।
अन्य देशबाट आफ्नो राज्यमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका कूल ४ सय ५४ जना पक्राउ परेको बताइएको छ । जसमध्ये ४५ प्रतिशत यमनी , ५१ प्रतिशत इथियोपियाली र ४ प्रतिशत अन्य राष्ट्रका नागरिक भएको स्थानीय पत्रिकाले बताएको छ।
त्यस्तै, २३ व्यक्तिलाई राज्यको सीमा पार गरेर भाग्दै गर्दा पक्राउ गरिएको बताइएको छ। उल्लंघनकर्तालाई भाग्न र प्रहरीबाट बच्न सहयोग पुर्याउने ८ व्यक्तिलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उल्लंघनकर्तालाई भगाउन प्रयोग गरिने सवारी साधन, बस्न दिइएको आवाससमेत जफत गरिने र त्यस्ता व्यक्तिको नाम स्थानीय संचारमाध्यममा प्रकाशन गरिने समेत बताइएको छ।